Wasiirka Arrimaha gudaha oo kulan deg deg ah la leh Gudoomiyaasha degmooyinka Gobolka banaadir – idalenews.com
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka ayaa kulan deg deg ah la leh Gudoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir, iyadoo kulankan looga hadlayo arrimaha ammaanka Muqdisho, waxaana dibad joog ka ah saxaafada.
Sida ay sheegayaan wararka kulankan oo ay ka qeyb galayaan Gudoomiyeyaasha 16-ka degmo ee Gobolka Banaadir ayaa ah mid ahmiyad gaar ah lagu siinayo adkeynta ammaanka, xilli maalmihii u dambeeyay ammaanka caasimada uu faraha ka sii baxayo.
Wariyeyaasha oo kulankan dibad joog ka ah ayaa soo sheegaya in kulankan uu yahay kii u horeeyay noociisa oo ammaanka looga hadlayo oo ay Wasaarada Arrimaha gudaha la yeelato Gudoomiyeyaasha degmooyinka.
Wararka qaar ayaa sheegaya in marka uu soo dhamaado kulankan laga soo saaro doono go’aamo la xiriir ammaanka iyo sida looga hortagi lahaa falalka amaan daro ee ka dhaca magaalada Muqdisho, kuwaasoo isugu jira dilalka iyo qaraxyada.
Gudoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa la rumeysan yahay inay udub dhexaad u yihiin amniga magaalada Muqdisho, waxaana lagama maarmaan ah in xiriir dhex maro iyaga iyo hey’adaha ammaanka dowladda.
Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa magaalada ka dhacayay qaraxyo ismiidaamin oo dad badan ku dhinteen iyo dilal qorsheysan, waxaana laga war dhowrayaa in Wasaarada arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ay qaado tallaabooyin la xiriira sugida ammaanka dalka.
Tiradii ugu badneyd Soomaalida ku nool Koofur Afrika oo dib ugu laabanaya dalkooda